Takumi R9B12-77 mutambo we 436782 518 jenareta plug plug, China Takumi R9B12-77 mechi ye 436782 518 jenareta spark plug Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - TAKUMI AUTO CHIKAMU
Takumi R9B12-77 mutambo we436782 518 Generator spark plug
620 enginjini jenareta Spark Plug kutsiva 436782
Injini Type: Natural Gasi / Biogas / Landfill Gasi Thread: M18x1.5
Tsvaga: 20.6mm Hex: 22.2mm
Electrode: Yakakura Kaviri Iridium L Gap Kutsiva: 436782
Application: GS 620
Electrode Rudzi Yakakura Kaviri Iridium L Gap
Zvakanakira zvekaviri iridium spark plugs:
1. Hupenyu hurefu: Ese electrode yepakati uye erekitirodhi yepadivi ane simbi yakakosha iridium. Iyo iridium zvinhu zvine simba rinopesana neoxidation kugona, uye tekinoroji yedivi re electrode inoita kuti spark plug gap ipfeke yakaderera, izvo zvinoita kuti hupenyu hurebe uye hurambe hwakasimba;
2. Kubata kwakasimba kwekudzimisa: Double iridium kaviri tsono dhizaini, ine yakanaka thermal conductivity, uchishandisa "hot melt" tekinoroji, ine yakakwira mhepo. Ita shuwa kuti tembiricha yekuzvichenesa inosimudzwa mukati memasekondi mashoma mushure mekutanga kuwedzera chiyero chekubudirira kwekudzima;
3. Tanga nekukurumidza: kuvandudza kushanda kwemafuta uye kukurumidza kugadzikana uye zvakanaka;
4. Kuchengetedza mafuta: platinum electrode pamwe neakakodzera gap rekudzima rinowedzera kuchaji inotarisisa mhedzisiro uye inonatsiridza nzira yekupisa, nekudaro kuchengetedza mafuta, kuchengetedza nzira nhatu inoshandura inoshandura, uye kuchengetedza mari yekugadzirisa mota;
5. Gadzirisa jitter: zvinogadzirisa kugadzirisa injini jitter inokonzerwa neoxidation ye spark plug uye kuvandudza simba rejini.